Coronavirus: sida la isu ilaaliyo, loogana hortago faafidda - GOV.UK
Coronavirus: sida la isu ilaaliyo, loogana hortago faafidda
Ogow sida la isu ilaaliyo, loogana caawiyo ka hortaga faafidda coronavirus.
COVID-19 ayaa weli ah halis jirta
Fahmidda halisaha COVID-19
Badbaadinta naftaada iyo dadka kaleba
U ogolow in hawo nadiif ahi soo gasho haddii aad ku kulmeysaan meel gudaha ah Ku kulmidda meelaha bannaanka ah
Is-baar isna go’doomi haddii loo baahdo
Si joogto ah u mar baaritaanka degdega ah haddii aadan lahayn astaamo si ay kaaga caawiso maareynta halistaada
Isku day in aad guriga joogtid haddii aadan ladneyn
Gacmahaaga si joogta ah u dhaq, daboolna qufaca iyo hindhisada
Isticmaalka app-ka NHS ee COVID-19
Yaree xiriirka dhow ee dadka kale
Fahmidda halisaha shaqsiyeed ee goobaha kala duwan iyo duruufaha
Ku safridda UK gudaheeda iyo dibadda
Ganacsiyada iyo goobaha
Warqadda xaalada COVID ee NHS-ta
Weli waa suurtagal in uu kugu dhaco ama aad faafisid COVID-19, xattaa haddii si buuxda laguu tallaaley.
Qof kasta oo qaba astaamaha COVID-19 ama natiijada baaritaanka lagaga heley wa in uu joogaa guriga oo uu isla markiiba is-go’doomiyaa. Haddii aad leedahay astaamaha COVID-19, waa in aad u soo qabanqaabisaa in aad qaadatid baaritaanka PCR sida ugu dhakhsaha badan, xattaa haddii aad qaadatey mid ama laba qaadasho oo ah tallaalka COVID-19.
COVID-19 ayaa nolosheena ka mid ahaan doona ilaa iyo mustaqabalka soo socda, sidaa darteed waxaan u baahannahay in aan barano sidaan ula noolaan laheyn aana u maareyn laheyn halisaha nafteena iyo dadka kaleba.
Dhammaanteen waxaan kaalinteena ka qaadan karnaa fahamka xaaladaha ay suuragal tahay in halista caabuqa COVID-19 iyo gudbinta ay ka sarreyso, oo aan qaadno tallaabo lagu yareynayo khatarahaas.
Raacitaanka hagahani wuxuu kaa caawin doonaa inaad fahanto xaaladaha ay jirto halista ugu weyn ee qaadista ama faafinta COVID-19 iyo tallaabooyinka aad qaadi karto si aad badbaado ugu sugnaato, dadka kalena u ilaaliso. Tallaabo kasta oo aad qaadi karto si aad uga caawiso yareynta faafidda waxay ka caawin doontaa yareynta cadaadiska NHS -ta bilaha jiilaalka.
Halista in la qaado ama la gudbiyo COVID-19 way ka sii badnaan kartaa meelaha qaarkood iyo marka la qabanayo waxqabadyada qaarkood. COVID-19 wuxuu ku faafaa gudbinta hawada, xiriirka dhow ee dhibcaha, iyo meelaha sagxadaha ah. Gudbinta hawada ayaa ah hab aad u weyn oo fayrasku ku wareego. Waxaa suurtogal ah inuu ku qaadsiiyo qof aadan xiriir dhow la lahayn, gaar ahaan haddii aad ku sugan tahay meel dadku ku badan yahay iyo/ama meel aan hawo fiican laheyn.
Dariiqadda ugu weyn ee loo faafiyo COVID-19 waa xiriirka dhow ee lala yeesho qof caabuqa qaba. Marka qof qaba COVID-19 uu neefsado, hadllo, qufaco ama hindhiso, waxaa ay siidayaan dhibicyo yaryar oo uu fayrasku ku jiro oo sababa qaadista COVID-19. Dhibcaha ayaa gaadhi kara indhaha, sanka ama afka ama waxaa hawo ahaan u liqi kara qof kale. Waxyaalaha yaryar ayaa sidoo kale ku degi kara sagxadaha isla markaana qofba qof ugu gudbin karaa taabashada.
Guud ahaan, halista qaadista ama gudbinta COVID-19 waxay ku badan tahay meelaha dadku ku badan yihiin iyo meelaha xiran, halkaas oo ay ku badan yihiin dadka laga yaabo inay caabuqa qabaan hawada nadiifka ahna ay xadidan tahay.
Xaaladaha ay ka jirto halis sareysa oo qaadista ama gudbinta COVID-19, waa in aad si gaar ah uga taxadartaa raacida hagaha ku saabsan ilaalinta naftaada iyo dadka kale marka aan nolosha caadiga ah ku noqoneyno. Tallaabo kasta oo yar ayaa naga caawinaysa inaan dhammaanteen is ilaalino.
Weli waxaa England gudaheeda ka jira kiisaska COVID-19, waxaana jira halis aad ku qaadi karto ama ku gudbin karto fayraska, xitaa haddii aad si buuxda isu tallaashay. Arintani macnaheedu waa in aad fahamsan tahay, aadna tixgelineyso halisaha in ay kugu dhaci karto ama aad faafin kartid COVID-19 xaaladaha kala duwan dhammaantood.
In kasta oo aysan jirin xaalad halis la’aan ah, hadana waxaa jira tallaabooyin sahlan oo wax ku ool ah oo aan qaadi karno si aan u ilaalino nafteena iyo kuwa kale ee nagu hareereysan.
Haddii aad ka welwelsan tahay in aad dib ugu noqoto ‘nolosha caadiga ah’, waxaa jira macluumaad ku yaala NHS oo ku saabsan sida loola tacaalo welwelka ku saabsan qaadista xayiraadaha.
Dhammaan dadka qaangaarka ah ee ku nool England ayaa hadda la siiyay ugu yaraan 2 qaadasho oo ah tallaalka COVID-19. Tallaallada waa kuwo badbaado ah oo waxtar leh. In si buuxda loo tallaalo ayaa ah habka ugu wanaagsan ee adiga iyo dadka kaleba looga badbaadin karo COVID-19.
Haddii aadan weli qaadan tallaalka COVID-19, waa in aad is tallaashaa. Caddeyntu waxaa ay tilmaameysaa in 2 qaadasho oo tallaalka COVID-19 uu bixiyo ilaalin aad wax ku ool u ah oo ah in aan isbitaalka la galin. Waxaa ay caadi ahaan qaadataa 2 ilaa iyo 3 todobaad in uu jirkaaga sameeyo ka felcelinta difaaca ah.
Si kastaba ha ahaatee, xittaa haddii aad si buuxda u tallaalan tahay, weli waad qaadi kartaa COVID-19 oo waad u gudbin kartaa dadka kale. Inkasta oo uu tallaalku bixiyo ka ilaalin aad u sareysa ee jirada aadka u daran, isbitaal gelida iyo dhimashada, warbixintii ugu dambeysay ee PHE waxay muujineysaa in ku dhowaad 1 ka mid ah 5-tii qof ee laba-tallaal qaatey ay weli u nugul yihiin in uu ku dhaco noocyada kala duwan ee Delta iyaga oo muujinaya astaamaha. Waxaad sidoo kale wali ku faafin kartaa COVID-19 dadka kale. Dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan sameyno waxa aan kari karno si aan u yareyno faafitaanka COVID-19 si aan u ilaalino dadka kale isla markaana aan u yareyno halista noocyada cusub ee soo koraya iyo faafitaanka.
Raacitaanka talada hagahan ayaa kaa caawin doonta sidii aan u ilaalin lahayn saaxiibadaada, qoyskaaga, iyo bulshada, oo ay ku jiraan kuwa la tallaalay.
Marka qof qaba COVID-19 uu qufaco, hadlo ama neefsado, waxaa ay siidaayaan dhibco yaryar iyo dhibco hawada la socota oo uu neef ahaan u qaadan karo qof kale. Ku-kulanka meelaha bannaanka ah ayaa si weyn u yareeysa halista ku gudbinta hawada, laakiin tani mar walba suurtogal ma aha. Haddii aad meel gudaha ah ku jirtaan, waa in aad ogolaan in ay hawo nadiif ah soo gasho si loo yareeyo halista qaadista iyo faafinta COVID-19.
Hawada nadiifta ah ee badan markaad soo gelisaan gurigiina ama meelaha kale ee xiran, waxay yaraaneysa fursada uu qof kale hawo ahaan u neefsan karo dhicaha yaryar ee cudurka sida.
Waxaad hawada nadiifta ah u soo gelin kartaa adiga oo daaha ka qaadaya meelaha ay hawada ka baxaan furanaya albaabada iyo dariishadaha. Furitaanka daaqadahaaga 10 daqiiqo oo kaliya, ama wakhti yar oo joogto ah marka aad awooddo, waxay samaysaa farqi weyn. Arintani waxay si gaar ah muhiim u tahay marka aad meelaha gudaha ah kula kulmeyso dadka aan kugula nooleyn.
Ha furin albaabada dabka. Haddii gurigaagu leyahay marwaxadaha hawada saara, tusaale ahaan kuwa ku yaala musqusha ama jikada, ka fikir in aad u dayso inay shaqeynayaan in ka badan sida caadiga ah iyada oo uu albaabku xirnaanayo ka dib markii uu qof qolkaa isticmaaley. Haddii aad ka walwalsan tahay kharashyada kululeynta, furitaanka dariishadaha muddo gaaban ayaa weli kaa caawin karta yareynta halista fayrasku ku faafi karo. Xirashada dhar badan ayaa kaa caawin karto in aad diiranaato. Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad bedesho qaabka qolkaaga si aadan u fariisanin meelaha qabow ee daaqadaha furan ama albaabada.
Waxaa jira hage loogu talagaley dadweynaha oo ku saabsan sida hawo-u-helidda meelaha gudaha ah si loo joojiyo faafitaanka COVID-19, oo ay ku jirto haddii qof is-go’doominayo. Arintan waxaa ku jira talo ku saabsan sida loo dalbado kaalmo maaliyadeed iyo mid hawl-qabad oo ee xagga kululaynta gurigaaga.
COVID-19 wuxuu ku faafaa hawada dhibco iyo aerosol ka soo baxa sanka iyo afka qofka cudurka qaba. Waa in aad xirataa weji-daboolka meelaha dadku ku badan yahay iyo meelaha xiran marka aad xiriir la sameyn doontid dad aadan caadi ahaan ula kulmin.
Haddii aad astaamo leedahay amaba lagaa heley cudurka
Haddii aad yeelato astaamaha COVID-19, si degdeg ah isu-go’doomi qaadana baaritaanka PCR test, xattaa haddii ay astaamuhu yihiin kuwo khafiif ah. Arintani waxaa sabab u ah dad badan ayaa astaamo khafiif ah kala kulma COVID-19, laakiin weli waxay u gudbin karaan fayraska dadka kale.
Astaamaha ugu mhiimsan ee COVID-19 waa mid ka mid ah kuwan soo socda oo xilli dhow kugu bilawday:
qufac joogta ah oo cusub
qandho aad u sareysa
lumitaanka, ama isbeddelka, dareenkaaga caadiga ah ee dhadhanka ama urta
Waa in aad isku go’doomisaa guriga marka aad qabsaneyso baaritaanka PCR ee aad sugeysid natiijada. Waa inaad is-godoomisaa haddii cudurka lagaa helo. Waa in aad is-go’doominta bilowdaa maalinta ay bilaabatey astaamahaaga iyo 10-ka maalmood ee buuxa ee ku xiga, ama maalinta baaritaankaaga la qaadey haddii aadan laheyn astaamo iyo 10-ka maalmood ee ku xigta. Tani waa sharciga, mana ku xirna in lagu tallaaley iyo in kale. Is-go’doominta waa muhiim sababta oo ah inaad cudurka u gudbin karto dadka kale, xitaa haddii aadan astaamo lahayn. Waa inaad guriga joogtaa waqtiga laguu sheegay oo dhan, maxaa yeelay waa waqtiga ay u badan tahay in fayraska dadka kale loo gudbiyo.
Haddii ay kuu sheegeen in aad is go’doomiso barnaamijka NHS ee Baaritaanka iyo Dabagalka
Waana in aad sidoo kale is-go’doomisaa haddii sidaa uu kuu sheegay barnaamijka NHS ee Baaritaanka iyo Dabagalka. Ogow:
maxay tahay in aad sameysid haddii aad guri kula nooshahay qof cudurka laga heley
waxa ay tahay in aad sameysid haddii aad xiriir la yeelatid qof ka baxsan qoyskaaga oo cudurka laga heley
Marka aad is go’doomineysid, raac:
hagaha joogitaanka guriga oo loogu talagaley dadka looga shakiyey amaba laga heley COVID-19
hagaha joogitaanka guriga oo loogu talagaley dadka xiriirka lala sameeyey ee aan qoyska ka tirsaneyn oo laga heley COVID-19
Arintan waxaa ay caawineysaa yareynta halista faafinta COVID-19 ee dadka kale ee ka tirsan qoyskaaga iyo bulshadaada. Labada xaaladoodba waa in aad joogtaa guriga waqti walba xiriirna aadan la yeelan dadka kale. Waxaa jira xaalado aad u kooban marka aan lagaaga baahneyn in aad sidan sameyso, sida in aad raadsaneyso caawimaad caafimaad. Haddii aad gurigaaga uga tagto muddada is-go’doomintaada sabab la ogol yahay, waa inaad ilaalisaa kala fogaanshaha bulshada, ka fogow 2 mitir dadka kale, oo xiro weji-dabool marka ay suurtogal tahay.
Waxaa suurtagal ah in aad xaq u leedahay in hal mar lagu siiyo £500 iyada oo la soo marinayo Barnaamijka Taageerada Lacag-siinta ee NHS ee Baaritaanka iyo Dabagalka haddii lagaa doonayo in aad guriga joogtid oo aad is-go’doomiso, ama aad tahay waalidka ama mas’uulka ilmo loo sheegey in ay is-go’odoomiyaan. Waa in aad booqataa bogga internet-ka degmadaada si aad u hesho wixii faahfaahin ah ee ku saabsan Taageerada Lacag-siinta ee NHS ee Baaritaanka iyo Dabagalka iyo taageerada kale ee laga bixiyo degmadaada oo ay ku jirto helitaanka cunada. Haddii aad u baahan tahay daawo dhakhtar kuu qoray waxaa jira adeeg gaarsiinta daawada oo laga heli karo farmashiyeyaasha iyo Dhakhtarada Cudurada Guud ee qaybiya.
Waa lagu ganaaxi karaa haddii aadan is-go’doomin ka dib markii ay kuu soo sheegeen mashruuca Baaritaanka iyo Dabagalka (Test and Trace) ee NHS-ta.
Lagaama doonayo in aad is-go’doomiso haddii aad guri kula nooshahay qof qaba COVID-19, ama aad tahay qof xiriir is gaarid ah la leh qof qaba COVID-19, iyo arimaha soo socda mid ka mid ah ay jirto:
aad si buuxda u tallaalan tahay
aad tahay qof da’diisu ka yar tahay 18 sano iyo 6 bilood jir
aad qeyb ka qaadatey ama aad hadaba qeyb ka tahay tijaabo la ansixiyey oo tallaalka COVID-19
aadan awoodin in aad isu tallaasho sababo caafimaad awgeed
Barnaamjika NHS ee Baarista iyo Dabagalka ayaa kula soo xiriiraya si ay kuugu sheegaan in laguu aqoonsadey qof xiriir sameeyey, ayna u hubsadaan in sharci ahaan lagaa doonayo in aad is-go’doomiso. Haddii aan sharci ahaan lagaa dooneyn in aad is-go’doomiso, waxaa lagu siin soonaa talo sida la isu baaro waxaana lagu siin doonaa hagid sida looga hortago faafida COVID-19. Haddii aadan qabin wax astaama ah, waxaa lagu siin doonaa talo in aad sameysid baaritaanka PCR sida ugu dhakhsaha badan.
Waa in aadan qorsheynin in aad qaadatid baaritaanka PCR test haddii uu horey PCR test kaa heley cudurka 90-kii maalmood ee ugu danbeysey, aan ka aheyn haddii aad dib u yeelatid astaamo cusub oo COVID-19 ah, maadaama ay dhici karto in baaritaanka PCR test u weli kaa heli karo cudurka ilaa iyo mudo ka dib caabuqa COVID-19
Waxaan ka heli kartaa hagid dheeraad ah oo loogu talagaley xiriirka qoyska iyo hagida xiriirka aan qoyska ka tirsaneyn ee ah dadka laga heley abuqa cacudurka COVID-19.
Ilaa iyo 1 qof 3-dii qofba oo qaba COVID-19 ayaan laheyn wax astaamo ah. Arintan micnaheedu waa in ay faafin karaan fayraska iyaga oo aan ogeyn. Baaritaan iska qaadista joogtada ah waxay kordhisaa fursadaha lagu ogaan karo COVID-19 marka aad qabtid balse aanay astaamo kaa muuqan, arintaas oo caawineysa inaad hubiso inaadan faafin COVID-19.
Baaritaanka degdega ah ee Rapid lateral flow weli waa jiraa waana lacag la’aan. Waxaa si gaar ah ay diiradda u saartey dadka aan si buuxda loo tallaalin, kuwa waxbarashada ku jira, iyo kuwa ku jira goobaha halista sare leh, sida NHS, daryeelka bulshada iyo xabsiyada.
Dadku waxay sidoo kale laga yaabaa inay doonayaan inay isticmaalaan baaritaanka degdega ah oo joogto ah si ay uga caawiyaan maareynta xilliyada halista ah sida xiriir dhow iskula yeelashada goobaha halista sare leh ama markay waqti dheer la qaadanayaan shaqsi aad u nugul. Waxaad foomamka baaritaanka ka heli kartaa farmashiyada ama adiga oo isticmaalaya internet-ka. Macluumaad dheeraad ah ka ogow sida loo helo baaritaanka degdega ah oo loo yaqaano rapid lateral flow tests.
Haddii aad yeelato astaamaha COVID-19, si degdeg ah isu-go’doomi qaadana baaritaanka PCR test.
Haddii ay kugu dhacdo astaamaha COVID-19, si degdeg ah isu-go’doomi qaadana baaritaanka PCR test, xattaa haddii ay astaamaha yihiin kuwo khafiif ah. Waa in aad isku go’doomisaa guriga marka aad qabsaneyso baaritaanka ee aad sugeysid natiijada. Waa inaad is-godoomisaa haddii cudurka lagaa helo.
Haddii aad xanuun dareento laakiin aadan qabin astaamaha COVID-19, ama lagaa helin COVID-19, waxaa laga yaabaa inaad weli qabto cudur loo gudbin karo dadka kale. Cuduro badan oo caadi ah, sida hargab-qandhoolaha ama hargabka caadiga ah, ayaa ku faafa in qofba qofka kale u gudbiyo. Arintan waxaa ay ku dhici kartaa:
markii qof jirro qaba uu neefsado, hadlo, qufaco ama hindhiso, wuxuu hawada ku siidaayaa walxo ay ku jiraan fayrasyada oo qof kale neefsan karo
iyada oo la adeegsanayo sagxadaha iyo alaabooyinka oo waliba ku sumoobi kara marka dadka uu ku dhaco jirro ay qufacaan ama ku hindhisaan agtooda ama haddii ay taabtaan, qofka xiga ee taabanaya sagxadaas ayaa markaa qaadi kara cudurka
Joogista guriga ilaa aad ka dareemayso fiicnaan waxay yaraynaysaa halista aad ugu gudbinaysid cudur asxaabtaada, dadka aad wadashaqaynsaan, iyo kuwa kale ee bulshadaada ah. Arintani waxay gacan ka geysan doontaa yareynta culeyska saaran adeegyadeena caafimaad.
Ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo ama isticmaal nadiifiyaha gacmaha si joogto ah maalintii oo dhan. Dhaqidda joogtada ah ee gacmuhu waa hab wax ku ool ah oo lagu yareeyo halista aad u qaadi karto cudurrada, oo ay ku jiraan COVID-19.
Gaar ahaan waa muhiim inaad gacmaha iska dhaqdo:
ka dib qufaca, hindhisada iyo duufsashada
ka hor intaadan cuntada cunin ama aadan cuntada gacanta ku taaban
ka dib markaad taabato sagxadaha ay taabteen dad badan oo kale, sida handaraabyada, biraha la qabsado iyo meelaha nalalka laga daaro
ka dib markaad taabato meelaha la wadaago sida jikada iyo musqulaha
marka aad guriga ku soo noqoto
Marka ay suurtagalka tahay, ka fogow in aad taabato indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga Haddii aad u baahan tahay inaad taabato wejigaaga, tusaale ahaan inaad gashato ama aad iska furto wejigaaga, dhaq ama nadiifi gacmahaaga ka hor iyo ka dib.
Qufaca iyo hindhisadu waxay siyaadiyaan masaafada ay safraaan iyo waqtiga ay hawada ku sii jiraanmtiro dhibco yaryar iyo aerosols uu qofku sii daayo. Daboolista qufaca iyo hindhisada waxay yareyn doonaan faafitaanka dhibcaha iyo aerosols-ka qaada COVID-19 iyo fayrasyo kale, oo ay ku jiraan kuwa keena qufaca iyo hargabka:
Isticmaalka app-ka NHS ee COVID-19 wuxuu caawiyaa joojinta faafitaanka fayraska isaga oo ku siinaya macluumaadka in aad xiriir la yeelatey qof markaa ka dib laga heley cudurka COVID-19, xattaa haddii aadan labadiina is aqoonin. Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa inaad gasho goobaha leh lambarka NHS QR oo aad talo ka hesho haddii uu jirey dillaac cudur. App-ka waa lacag la’aan waana sahlan yahay in la isticmaalo, adeegsigiisana wuxuu kaa caawin karaa in uu ilaaliyo gacalkaaga iyo dadka kaleba.
App-ka waxaa kale oo uu dadka u suurtageliyaa in ay soo sheegaan astaamaha iyo inay dalbadaan baaritaanka coronavirus. Si aad u caawiso naftaada iyo dadka kale, soo dejiso isticmaalna noocii ugu danbeeyey ee app-ka NHS ee COVID-19.
Marka qof qaba COVID-19 uu neefsado, hadllo, qufaco ama hindhiso, waxaa ay siidayaan dhibicyo yaryar oo uu fayrasku ku jiro oo sababa qaadista COVID-19. Dhibcahan ayaa uu liqi karaa qof kale.
Waxaad dooran kartaa inaad xaddido xiriirka dhow ee aad la leedahay dadka aadan inta badan la nooleyn. Waxaad kale oo dooran kartaa inaad qaadato baaritaan degdega ah ka hor intaadan xiriir dhow yeelan, sidoo kale waxaad ku dhiirigelin kartaa dadka aad la kulmeyso inay sidaa kale sameeyaan, taas oo kaa caawin doonta maareynta xilliyada halista. Kuwan waxaa ku jira xiriir dhow iskula yeelashada goobaha halista sare leh, ama markay waqti dheer la qaadanayaan shaqsi aad u nugul.
Kuwani waa xulashooyin shaqsiyadeed oo kaa caawin kara yareynta halista aad u leedahay inaad qaado ama aad faafiso COVID-19. Waa muhiim in la tixgeliyo in dadka kale laga yaabo inay doonayaan inay sii wadaan inay qaadaan tallaabooyin taxaddar leh. Dhammaanteen waa inaan tixgalino arintan oo aan siino fursad iyo masaafo dadka kale inay yareeyaan xiriirada dhow haddii ay rabaan.
Ka shaqaynta guriga iyo ku noqoshada goobta shaqada
Laga soo bilaabo Tallaabada 4 waxaan aragnay si tartiib ah ugu laabashada xafiisyada iyo goobaha shaqada. Markay shaqaaluhu ku laabtaan goobahooda shaqo, loo-shaqeeyayaashu waa inay sii wadaan inay raacaan tilmaamaha ku shaqeynta badbaadada leh. Marka la tixgelinayo ku noqoshada goobaha shaqo, loo-shaqeeyayaashu waa in ay:
ku cadeeyaan arintan qiimeynta halista ee goobtooda shaqo
qaadaan tallaabo lagu maareynayo halista faafitaanka COVID-19, iyada oo waafaqsan hagaha
Hadii horey laguugu aqoonsadey in aad tahay qof caafimaad ahaan aad u nugul (CEV)
COVID-19 Iyada oo la raacayo talooyinka caafimaad ee khubarada iyo guulaha lagu guulaystay ee barnaamijka tallaalka COVID-19, dadka hore loogu tixgeliyey inay yihiin CEV lagulama talinayo inay mar kale ka gaashaantaan. Haddii hore laguu aqoonsaday in aad tahay CEV, waa inaad sii wadaa raacitaanka hagaha ku jira boggan. Waa inaad talo ka qaadataa xirfadlahaaga caafimaadka in taxaddarro dheeraad ahi kugu habboon yihiin iyo in kale.
Haddii aad tahay qof haween uur leh
Haddii aad tahay qof haween uur leh, fursada aad ku qaadi karto COVID-19 kama sareyso dadka kale, umana badna in aad si daran ugu jirran doonto.
Ugu yaraan, waa in aad raacdaa isla hagaha sida dadka kale. Haddii aad uur leedahay in ka badan 28 toddobaad, ama haddii aad uur leedahay oo aad leedahay xaalad caafimaad oo joogta ah, taas oo ku gelinaysa halis aad uga weyn in aad ugu sugnaatid jirro daran oo ka timaada COVID-19 xilli kasta mudada aad uurka leedahay, waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaad ka fekerto xaddididda xiriirka dhow ee dadka aadan sida caadiga ah si joogto ah ula kulmin.
Haddii aad ku nooshahay xaafad heleysa ka fal-celinta la xoojiyey oo COVID-19
Dawladdu waxay la shaqeyneysaa maamulada maxalliga ah ee u baahan ka fal-celinta la xoojiyey ee COVID-19 si looga fogaado NHS-ta inay la kulanto cadaadis aan loo adkeysn karin. Aagagga ka fal-celinta la xoojiyey waxay heli doonaan taageero dheeri ah, sida baaritaanka la xoojiyey iyo saadka si loo kordhiyo qaadashada tallaalka, muddo 5 toddobaad ah. Haddii aad ku nooshahay mid ka mid ah xaafadaha ay dhibaatadu saameysey ee dawladda hoose, waa inaad akhrisaa macluumaadka iyo talada deegaankaaga ee COVID-19:
Waxaa si gaar ah muhiim ugu ah dadka ku nool xaafadahan inay raacaan hagaha boggan ku yaala oo gacan ka geysan doona yareynta faafitaanka COVID-19 iyo inay gacan ka geysato badbaadinta naftaada iyo dadka kale.
Waxaa jira nidaam nalalka taraafikada oo loo isticmaalayo safarada dalka dibadiisa ah. Waa in aadan u safrin dalalka ama meelaha ku jira liiska cas.
U soo safridda England adiga oo dibadda UK ka yimid
Waxa ay tahay inaad samayso marka aad England dibadda kaga timaado waxay ku xidhan tahay halka aad joogtey 10kii maalmood ee ka horeeyey imaatinkaaga.
Dadka qorsheynaya in ay u soo safraan England waa in ay raacaan hagidda soo gelitaanka UK.
Ogow liiska uu ku jiro dalka aad ka soo safrayso iyo waxa aad u baahan tahay inaad samayso.
Ku safridda UK dhexdeeda, Ireland iyo Channel Islands
Wax xayiraado ah ma saarna ku dhex-safridda England
Waa inaad hubisaa sharciyada goobta aad ku socoto haddii aad qorsheyneyso inaad u safarto Scotland, Wales ama Northen Ireland, ama Ireland ama Channel Islands maadaama ay jiri karaan xayiraado meeshaa ka jira.
Ha safrin haddii aad qabtid astaamaha COVID-19 ama aad is-go’doomineyso. iska qaad baaritaankaPCR oo raac hagaha joogista guriga.
Dhammaan meheradaha, oo ay ku jiraan goobaha lagu caweeyo, dib ayey u furmi karaan. Dhammaan xaddidaadaha cayaaraha, madadaalada, ama dhacdooyinka ganacsiga ayaa la qaadey.
Goobaha martigelinta sida baararka, makhaayadaha iyo baararka looma baahna inay sii bixiyaan adeeg miiska ama raacaan xeerarka kale ee kala fogaanshaha bulshada.
Ganacsiyada oo dhan waa in ay raacaan mabaadii’da lagu xusey hagaha ku shaqeynta si badbaado leh.
Loo shaqeeyayaashu wali waxay lahaan doonaan waajibaad sharci ah inay maareeyaan halisaha kuwa ay saameeyeen ganacsigooda. Qaabka loo sameeyo arintan waa in la sameeyo qiimeynta halista caafimaadka iyo badbaadada, oo ay ku jiraan halista COVID-19, iyo in la qaado tallaabooyin macquul ah si loo yareeyo halista aad ogaato. Hagidda si badbaado leh u shaqeynta waxay dejineysaa dhowr waxyaalood oo wax ka qabad ah oo loo shaqeeyaha ay tahay inuu tixgeliyo oo ay ka mid yihiin:
aqoonsashada aagagga hawo-xumidu ka jirto ee goobta kulan ku taal, tusaale ahaan adiga oo isticmaalaya la socdaha CO2, iyo qaadista tallaabooyin lagu hagaajinayo isu-socodka hawada aagagan
hubinta in shaqaalaha iyo macaamiisha aan caafimaad qabin aysan imaan goobta shaqada ama goobta kulanka -bixinta gacmo nadiifiyaha si loogu sahlo shaqalaha iyo macaamiisha inay gacmahooda si joogto ah u nadiifiyaan, ayna nadiifiyaan meelaha ay dadku si joogto ah u taabtaan.
la socodsiinta shaqaalaha iyo macaamiisha talaabooyinka aad dejisay.
Ganacsiyada waxaa sidoo kale lagu dhiirrigelinayaa inay sii wadaan muujinta sumadaha NHS-ta ee QR ee macaamiisha doonaya inay ku galaan goobahooda iyaga oo adeegsanaya App-ka COVID-19 ee NHS-ta, si digniin loogu diro haddii uu dillaac cudurka ahi jiro, loona qaado tallaabooyin lagu badbaadin karo dadka kale, laakiin arintani mar dambe ma sii ahaaneyso shardi sharci ah.
Warqadda xaalada COVID ee NHS-ta waxay dadka u sahleysaa in la ogaado xaaladaada COVID-19 lana caddeeyo in ay halis ka hooseysa ugu sugan yihiin in ay dadka kale ku faafiyaan, iayaga oo si buuxda isu tallaaley, mar dhow laga waayey cudurka, ama cadeyn in ay leeyihiin difaac dabiici ah. Goobaha qaarkood waxaa laga yaabaa in ay ku weydiiyaan warqadda xaalada COVID oo shardi u ah gelitaanka.
Waxaan kula talineynaa hay’adaha ku yaala goobaha halista sare ka jira in ay isticmaalaan warqadda xaalada COVID ee NHS-ta shardi in lagu galo ah, si loo yareeyo halista COVID-19. Arintani waxaa ay si gaar ah muhiim ugu tahay, halka dadku ku badan yahay (sida goobaha caweyska habeenkii) oo ay u badan tahay in dadku ay u dhowaadaan dad ka baxsan qoyskooda.
Waxaa jira goobooyin gaar ah oo warqadda xaalada COVID ee NHS-ta tahay in aan loo isticmaalin shardi in lagu galo ah, si loo hubiyo in dadku dhammaan ay geli karaan. Kuwan waxaa ku jira adeegyada daruuriga ah iyo dukaamada daruuriga ah oo awoodey in ay furnaadaan mudadii dillaaca uu jirey oo dhan.